ပေးစပျမဲ့ညီမ – My Blog
ရီရီခြို ရုံးခနျးထဲ ကို ဝငျလိုကျသညျ နှငျ့ ရုံးသူ ရုံးသား မြား အားလုံး အပွုံးနဲ့ ဆီးကွိုလိုကျကသြညျ ။ ရီရီခြို လညျး အိတျလေး ထဲမှ အဝါရောငျ စာအိတျလေးမြား တဈခုဆီ ရုံးသူ ရုံးသားမြား ကို လိုကျဝေ လသေညျ ။ ထို အဝါရောငျစာအိတျလေး မြားသညျ သူမ ၏ မင်ျဂလာဆောငျ ဖိတျစာမြား ပငျ ဖွဈသညျ ။ ရီရီခြို မှာ ပိနျပိနျသှယျသှယျ အသားဖွူဖွူလေး ဖွဈသညျ ။ မကျြနှာသေးကာ မကျြလုံးဝိုငျးဝိုငျးလေး နှငျ့ ကလေးမကျြနှာလေး ဖွဈသညျ ။ ခဈြစရာကောငျး သဖွငျ့ တဈရုံးလုံး ကလညျး ခဈြကသြညျ ။
နောကျဆုံး ကနျြနသေော တဈစောငျမှာ ကုမ်မဏီပိုငျရှငျ ကိုကောငျးထကျ သာ ကနျြတော့ သဖွငျ့ ကိုကောငျးထကျ ရုံးခနျးထဲ ဝငျလိုကျ လသေညျ ။ ” လာ ရီခြို . ဘယျနဆေ့ောငျမှာလညျး ” ” သဘကျခါ ပါ ဆရာ . ” ” ဒါဆို ဆရာ့ ကို အကူညီ တဈခုပေးအုနျး . မနကျဖွနျ ရုံးတကျ ပေးပါလား . အရေးကွီး ဧညျ့သညျနှဈယောကျ နဲ့ တှဖေို့ ရှိတယျ . လာ နိူငျမယျ မလား ” ” ရပါတယျ ဆရာ ရဲ့ . လာနိူငျပါတယျ ” ” အေးကှာ . ဒီကုမ်မဏီ မှာလညျး စကားပွောကောငျးတာ ဆိုလို့ ရီခြို ဘဲ ရှိတာ . မနကျဖွနျ တှရေ့မညျ့ နှဈယောကျ က အရေးကွီးတယျ . ” ” ဟုတျကဲ့ . သမီး ဘဲ သှားရမှာလညျး ” ” ဟုတျတယျ အဲ့ဒါကွောငျ့ ပွောနရေတာ။
ဆရာ က မနကျဖွနျ တဈနကေုနျ အစညျးအဝေး ရှိနတေယျ . အဲ့ဒါ ဆရာ့ အစား ရီခြို သှားပေးပါ . အဆငျပွဖေို့ လိုတယျ . အဆငျမပွရေငျ ဆရာတို့ ကုမ်မဏီ အမြားကွီး ထိခိုကျ သှားနိူငျတယျ . ” ‘ ‘ ဟုတျ . သမီး ကွိုးစားပေးပါမယျ ” ” ယုံပါတယျ . ရီခြို မင်ျဂလာဆောငျလညျး ဆရာ လာဖွဈအောငျ လာမှာပါ ” ” ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဆရာ . ရီခြို့ ကို ခှငျ့ပွုပါအုနျး . ” ” ကောငျးပါပွီ ခငျဗြာ .” ရီခြို လညျး ဒီနေ့ ရုံးခှငျ့ ယူထားသညျမို့ အိမျပွနျလာခဲ့ပွီး မင်ျဂလာဆောငျ ကိစ်စ ကို စီစဉျ နရေသညျ နှငျ့ တဈနေ ကုနျ သှားသညျ ။ နောကျတဈနေ့ ရုံးယူနီဖောငျးလေး ကကြနြန ဝတျပွီး ရုံးတကျ လာခဲ့သညျ ။
သတိုးသားလောငျး က တားသေးသညျ ။ ဒါပမေယျ့ ကုမ်မဏီ ကိစ်စ က အရေးကွီးနတေော့ ရီခြို ပဈမထားခငျြ ။ ” သမီး ရောကျပွီ ဆရာ ” ” ဟုတျပွီ ရီခြို . ဆရာ ကလညျး ခု အစညျးအဝေး သှားရတော့မှာ . ဟော့ဒီ လိပျစာ ကိုသှား . အဲ့မှာ စားသောကျခနျး တဈခနျး ဘိုကငျခြိတျထားတယျ . အဲ့ကို ဧညျ့သညျနှဈယောကျ လာ လိမျ့မယျ . ကုမ်မဏီ နဲ့ ပါတျသတျတာ ရှငျးပွပွီး သိခငျြတာ မေးလိမျ့မယျ . အတတျနိူငျဆုံး အဆငျပွအေောငျ ကွိုးစားပေးပါ ” ” ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာ . ဆရာ စိတျမပကျြစေ ရပါဘူး . . ” ရီခြို လညျး ရုံးက ပေးထားသော ကားဖွငျ့ ထို စားသောကျဆိုငျ သို့ သှားလိုကျသညျ ။
ခြိတျထားသော အခနျး ၆၉ ကို ရီခြို သှားလိုကျသညျ ။ ဆရာ က ကှကျတိ စီစဉျထားသညျ့ စားသောကျဖှယျရာ မြားက အခနျးထဲ အသငျ့ ရှိနသေညျ ။ ရီခြို လညျး ခုံမှာ ထိုငျစောငျ့နလေိုကျသညျ ။ မညျသူ မြှ မရောကျသေး ။ ငါးမိနဈခနျ့ကွာသော အခါ . ” မင်ျဂလာပါ . တှရေ့တာ ဝမျးသာပါတယျ ” အသကျ သုံးဆယျကြျော ဒေါငျ့ကောငျးကောငျး အမြိုးသား နှဈဦး လကျဆှဲအိတျလေး မြားဖွငျ့ ဝငျလာ လသေညျ ။
ရီခြို လညျး ထပွီး နူတျဆကျ လိုကျသညျ ။ ” ကြှနျတျော တို့ကို ကုမ်မဏီ က လှတျလိုကျတာ . ” ” ဟုတျ . ကြှနျမ ကိုလညျး ကုမ်မဏီ က လှတျလိုကျတာပါ . ” ” ဟုတျကဲ့ . ဟုတျကဲ့ . ” အားလုံး ထိုငျလိုကျကသြညျ ။ ” ကြှနျတျော တို့က ဒီက ခြိတျတဲ့ ညီမ ကို အသကျ မနညျးကွီးမယျ ထငျနတော . ” ” ရှငျ . ဟုတျလား . ခဈခဈ . အလုပျကိစ်စ ပွောရအောငျလား ရှငျ ” ” ဟုတျကဲ့ . ညီမ ဘယျမှာ လုပျခငျြပါလညျး ဟိုတယျ မှာလား ခငျဗြ ” စကားကွီး က တဈမြိုးခညျြးမို့ ရီခြို ကွောငျအမျးအမျး ဖွဈသှားသညျ ။ ” ရှငျ . ဒီမှာဘဲ လုပျလိုကျမယျလေ . ဖွဈတတျမလား . ” ” ရပါတယျ . ညီမ ဆန်ဒ ပါဘဲ ” ထို လူနှဈယောကျ မကျြလုံးမြားသညျ ရီခြို့ အား ကိုကျစား မတတျကွညျ့နကြေ သဖွငျ့ ရီခြို ကွောကျလာသညျ ။
သို့သျော အဆငျပွအေောငျ သူတို့ ကနြေပျအောငျ ကွိုးစားပေးပါ လို့ ဆရာ မှာထားသညျ မို့ မကျြနှာခြိုလေး သှေးနရေသညျ ။ ” အကို တို့ သိခငျြတဲ့ ကိစ်စတှေ . မေးလို့ရပါပွီ ရှငျ . ” ” ဟုတျကဲ့ . ညီမ အသကျ ဘယျလောကျလညျး ” ” ရှငျ ” ရီခြို အလုပျကိစ်စ မေးမညျ ထငျတာ . ခုတော့ ရီခြို အသကျ လာ မေးနတေယျ ။ ” နှဈဆယျ ပါရှငျ့ . အလုပျ ကိစ်စလေး ပွောရအောငျလေ ” ” ဟုတျကဲ့ . ခုလညျး အလုပျကိစ်စ ဘဲ ပွောနတောလေ . ” ရီရီခြို ကွောငျအမျးအမျးလေး ဖွငျ့ ခေါငျးညိမျ့ လိုကျသညျ ။ ” ဘာလညျး ညီမ က အကိုတို့ကို အသုံးမကဘြူး . မစှမျးဆောငျနိူငျဘူး . ထငျလို့လား . ရတယျလေ ဒါဆိုလညျး အကိုတို့ ကုမ်မဏီ သှားမယျ . . ” ရီခြို လနျ့ဖွနျ့သှားသညျ ။ ” နေ နေ နပေါအုနျး အကိုတို့ရယျ . ဟုတျကဲ့ အကိုတို့ မေးတာ ဖွပေါမယျ ” ထို အခါ လူနှဈယောကျ လညျး ရီခြို ဘေး တဈဖကျ တဈခကျြ ဆီမှာ ထိုငျလိုကျသညျ ။ ရီခြို လညျး ကွောကျလာသညျ ။
ဒါပမေယျ့ အဆငျပွဖေို့ အရေးကွီးသညျ မို့ မသိကြိုးကြှံ ပွုနလေိုကျသညျ ။ ”အကို တို့ ဒါ ညီမတို့ ကုမ်မဏီ က ထုတျတဲ့ ပစ်စညျးတှပေါ ” ရီခြို ကွျောညာ စာရှကျလေး ပေးလိုကျသညျ ။ လူ နှဈယောကျ ကလညျး စာရှကျကွညျ့ကာ ဟိုပစ်စညျး မေးလိုကျ ဒီ ပစ်စညျးမေးလိုကျ လုပျနသေညျ ရီခြို လညျး အပီအပွငျ ရှငျးပွလသေညျ ။ သို့နှငျ့ ရီကြ မောကြ ဖွဈကာ ခငျမငျ လာလသေညျ ။ ” အျော ညီမ ဟို ပစ်စညျးလေး ထုတျခိုငျးပါလား . ” ” ဘယျ ပစ်စညျးလညျး အကို . ” ” ဟို တုနျခါစကျတှပေေါ့ . နိူငျငံခွား ကနေ တိုကျရိုကျမှာပွီး တရားဝငျ ဖွနျ့လို့ရအောငျ ” ” တုနျခါစကျ ဆိုတာ ဘာလညျး အကိုရ . ညီမ မသိလို့ . ” ထိုစဉျ ညာဘကျမှ လူသညျ ရီခြို နားရှကျလေး ကို လကျကလေး ကလိလိုကျသညျ ။ ရီခြို လနျ့ပွီး အျောလိုကျမိသညျ ။
” အမလေး ယားလိုကျတာ ” ညာဘကျလူ ကလညျး ရီခြို ညာဘကျ နားလေး ကို လကျကလေး ဖွငျ့ တို့ပွနျသညျ ။ ရီခြို အရမျးယား သညျမို့ မခံနိူငျရှာ . ” အိုးး ယားတယျ အကိုရ . ချချ ” ” အဲ့လို သဘောတရာပေါ့ . အဲ့စကျ က ဒီလို လုပျ ဥပမာပွမယျ . ” ညာဘကျလူ က သူ၏ နပျကတိုငျ ဖွုတျလိုကျသညျ ။ ရီခြို ၏ လကျကလေးမြား ပူးလိုကျသညျ ။ ရီခြို လညျး ကွောငျအမျးအမျး ဖွဈသှားသညျ ။ ” ညီမလေး လကျတှကေို ဒါလေးနဲ့ ပူးခညျြထားလိုကျမယျ . ဒါဆို ညီမ လကျတှေ ကာလို့ မရတော့ဘူး . ပွီးရငျ အကိုတို့က နားကို ကလိပေးမယျ . ခံစားကွညျ့ ” ရီခြို လကျတှကေို ပူးခညျြထားမယျ တဲ့ ။ သူတို့ ငွိုငွငျလို့ မဖွဈ အလုပျအဆငျပွဖေို့ အရေးကွီးသညျ မို့ ရီခြို သတ်တိမှေးပွီး လကျခံလိုကျသညျ ။ ညာဘကျလူ ကလညျး ရီခြို့ လကျလေး နှဈဖကျ ကို ပူးခညျြလိုကျသညျ ။
ပွီးနောကျ ပိုနသေော ကွိုးစ ကို ဆှဲကာ ရီခြို လကျတှကေို ခေါငျးနောကျ ပို့လိုကျသညျ ။ ထို အခါ ရီခြို လကျကို ခေါငျးအုနျးထား သလို နောကျစေ့ နှငျ့ ကပျနေ သလို မွောကျပေး လိုကျရသညျ ။ ထို အခါမှ လူ နှဈဦး သညျ ဘယျ တဈဖကျ ညာတဈဖကျ ရီခြို့ နားလေးကို လကေလေး မှုတျပေးလိုကျသညျ ။ ရီခြို ခေါငျးလေး ပုပုသှားသညျ ။ ” အီးး ယားတယျ ချချ တျောပါတော့ ချ ” ရီခြို နားနှဈဖကျ ကို လြှာတှေ နဲ့ ထိုးကလိ လိုကျတော့ ရီခြို အသံ ထှကျ လာသညျ ။ ” ယားတာ ကို အောငျ့ခံလေ ညီမရဲ့ ” ” မရဘူး အကိုရ တမြိုးခညျြးဘဲ ” ” အဲ့ဒါ ဇိမျယူခွငျး တဈမြိုးလေ . ညီမ ရဲ့ . ဒီမှာ အကို့ ကိုကွညျ့ . ” ဘယျဘကျက လူက မငျးခနျ့ ညာဘကျက လူက စိုးကြျော ။ မငျးခနျ့ သူ၏ အကြီ င်ျကို ဆှတျခြှတျပွလိုကျသညျ ။
ဗလ ကွှကျသားတှကေ အမွောငျးလိုကျ ။ ” ကဲ ညီမ အကို့နိူ့သီးတှေ ကိုငျကွညျ့ ” ” ဟငျ့အငျး မကိုငျရဲဘူး ” စိုးကြျော ကလညျး ဝငျကူသညျ ။ ” ကိုငျလိုကျစမျးပါ ညီမရယျ . ” ရီခြို လကျတှကေ ပူးရပျသား ဖွဈနသေညျ ။ စိုးကြျော လညျး ရီခြို လကျတှကေို ကိုငျပွီး မငျးခနျ့ နိူ့သီးတှကေို စမျးပေးလိုကျသညျ ။ ရီခြို ကတော့ ရှကျပွုံးလေး ဖွဈနသေညျ ။ စိုးသူ လညျး ရီခြို လကျတှကေို နောကျပွနျဆှဲပွီး ခေါငျးနောကျ ပွနျပို့ထားပွီး ရီခြို့ ရငျဘကျကို လကျဖွငျ့ ကိုငျစမျး လိုကျသညျ ။ ရီခြို လနျ့သှားသညျ ။ ” ဟာ . အကို ” ” ကဲ ယားလား . ခံစားကွညျ့ ” ရီခြို နို့တှေ အကြီ င်ျပျေါ မှ အနယျခံနေ ရသဖွငျ့ ရီရီခြို ရငျတှေ ခုနျလာသညျ ။ သူတို့ကိုငျတှယျ ပှတျသတျနမှေု ကို ကနြေပျနသေလို ဖွဈနသေညျ ။ ယားလညျး ယားနသေညျ ။ နယျရငျး နယျရငျး နှငျ့ ရီခြို လညျး ဖီးလျတကျ လာသညျ ။ ” ဟာ ” ရီခြို အကြီ င်ျကွယျသီးမြား ပွုတျသှားလသေညျ ။ အောကျမှ ဘရာစီယာ ပနျးရောငျလေး ပငျ ပျေါလာ သညျ ။
မငျးခနျ့ လညျး ကွယျသီးမြား ကို တမငျ ရဲတငျးစှာ ဖွုတျနလေသေညျ ။ ရီခြို လညျး ဘာလုပျရမှနျး မသိ ။ ထှကျပွေးရမလညျးလား . ငွိမျခံနရေမညျလား မဝခှေဲ တတျတော့ ။ ” ဟာ အကို မလုပျနဲ့တော့လေ . ဒီလောကျဘဲ ကောငျးတယျ ” ” ကောငျးလကျစ နဲ့ ပို ကောငျးအောငျ ပွမလို့ပါ . ” ပွောရငျး နှငျ့ပငျ အပျေါယူနီဖေါငျးလေး ပှငျ့ပွီး ဘရာစီယာလေးကို အောကျသို့ လှနျခခြွငျး ခံလိုကျရသညျ ။ နို့အုံ နှဈဖကျ နှငျ့ နို့သီးခေါငျး နီညိုရောငျလေးတှေ က ဘှားခနဲ ပျေါသှားသညျ ။ လူ နှဈဖကျ ခေါငျးက ပွိုငျတူ ငုံဝငျ သှားသညျ ။ ” အိုး ဟာ . ယားတယျ . မစို့တော့နဲ့ ” လကျတှကေလညျး နောကျပွနျလှနျဆှဲ ခံထားရသညျ ။ နို့နှဈဖကျလုံး ပွိုငျတူ အစို့ခံလိုကျ ရသဖွငျ့ ရီခြို အသညျးယား လာသညျ ။ ထို နှဈယောကျကတော့ တပွှတျပွှတျ ဖွငျ့ ငုံစို့နဆေဲ ။
စိုးကြျော သုတျခနဲ ထပွီး အိတျထဲ မှ ပစ်စညျးတဈခု ထုတျကာ မီးပလကျထိုး လိုကျပွီး ရီခြို ကို လာပွသညျ ။” ညီမလေး ဒါက တုနျခါစကျအပွငျးစားလေ . နို့ကိုငျ ခံရတာ ထကျ ကောငျးတယျ . ပွပေးမယျ ” ရီခြို ကတော့ ကွောငျအမျးအမျး ဖွဈနဆေဲ ။ ” ဗွီးးးးးးးးးးးး ” ” အားးး အကို ခံစားရတာ တမြိုးဘဲ . အရမျး အသညျးယားတယျ . ” ရီခြို့ နို့တှေ ကို တုနျခါစကျဖွငျ့ တို့ပေးလိုကျ ခွငျး ဖွဈသညျ ။ ရီခြို တုနျခါစကျ ကွောငျ့ ဖီးလျပို တတျလာတော့သညျ ။ ထိုစဉျ စိုးကြျော သညျ တုနျခါစကျ ကို ရီခြို ဘောငျးဘီခှကွား ပွောငျးထိုး လိုကျသညျ ။ ” ဟာ . အဲ့ဒါ မလုပျပါနဲ့ ” သူမ တားသျောလညျး မရတော့ ။ ရီခြို ပေါငျမြားကို မငျးခနျ့ ဖမျးခြုပျပွီး ဆှဲကား ပဈလိုကျသညျ ။ ထို အခါ စိုးကြျော ရီခြို ပေါငျခှ ကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး အနအေထားဖွငျ့ စကျကို အဓိက နရောအား ဖိကပျထား လိုကျသညျ ။
ရီခြို အသားတှေ တဆကျဆကျ တုနျလာပွီး ” အိုး အကို ရပျလိုကျတော့ . မရတော့ဘူး . အရမျး ယားတကျ လာပွီ . အဟငျ့ ” စိုးကြျော ကတော့ ရီခြို့ ခှအား ပိုလိုပငျ ဖိပှတျလိုကျသညျ ။ စကျသံကလညျး တဗွီးဗွီး နှငျ့ မွညျနသေလို ရီခြို လညျး အရသာ သိလာ သဖွငျ့ ငွိမျနလေိုကျသညျ ။ စိုးကြျော ဆတျခနဲ ရီခြို ဘောငျးဘီ ကွယျသီးကို ဖွုတျခါ ဆှဲခြှတျခလြိုကျသညျ ။ အပျေါ က မငျးခနျ့ က သိုငျးဖကျ ပွီး ခြုပျထားသဖွငျ့ ရီခြို မရှုနျးနိူငျတော့ ။ ” ဒီတိုငျးဘဲ လုပျပါ . မခြှတျပါနဲ့တော့ . ” ” ဘောငျးဘီ က ထူနတေယျ ညီမရဲ့ . ပို ကောငျးသှားမယျ ကွညျ့နေ ” ပွောရငျး ရီခြို ဘောငျးဘီလေး ကြှတျခါ အတှငျးခံပနျးရောငျလေးသာ ကနျြတော့သညျ ။ အဖုတျ ကလညျး ဖောငျးကွှ နသေညျမို့ မို့မို့ကွီး ဖွဈနသေညျ ။ စိုးကြျော စကျဖွငျ့ ဖိထိုး ကပျလိုကျသညျ ။
” အမေ့ အိုးအအ . အကို အားး ” ရီခြို ကငျြတငျတငျ ဖွဈလာတော့သညျ ။ အထိ မခံနိူငျတော့ ။ ပွောကာမှ ပိုဆိုးသလို ရီခြို အတှငျးခံ ဘေးတဈဖကျ ကို ဆှဲလှနျပွီး ပျေါလာသော ရီခြို စောကျဖုတျ ကို တနျး ဖိတို့ လိုကျလသေညျ ။ ” အားးးး အကို ညီမ မခံနိူငျတော့ဘူး . တျောပွီ . တျောပွီ . ပိတျလိုကျပါတော့ ” မငျးနိူငျ ရီခြို့ ပေါငျတှေ ဆှဲခှဲထား သဖွငျ့ နှုတျခမျးနှဈလှာ ဟကာ အစလေ့ေးဖွငျ့ ထောငျနတေော့သညျ ။ အခေါငျးနီရဲရဲလေး မှလညျး အရညျမြား စီးကလြာသညျ ။ စိုးကြျော စကျကို စောကျစလေ့ေး အား ဖိထိုး ကလိပေး ထားသညျ ။ ခဏ ကွာမှ စိုးကြျော စကျပိတျ လိုကျသညျ ။ ရီခြို လညျး စောကျရညျ တှေ ရှဲနပွေီ ။ မငျးခနျ့ ရီခြို ကို ပွနျလှတျပေးပွီး သူ မတျတပျရပျလိုကျသညျ ။ စိုးကြျော ကတော့ ရီရီခြို လကျက ကွိုးကို ဖမျးဆှဲထားသညျ ။ မတျတပျရပျနသေော မငျးခနျ့ ရီခြို မကျြနှာရှေ့ တှငျ ဘောငျးဘီခြှတျခြ လိုကျသညျ ။
လီးကွီး က ဖောကျခနဲ ကနျထှကျ လာသညျ ။ ရီရီခြို ထို လီးကို မွငျပွီး တံတှေးမြားပငျ မွိုခမြိသှားသညျ ။ မောငျ နှငျ့ ဖွဈဖူးသျောလညျး မောငျ့ထကျ သိသိသာသာကွီး သော လီးကွီး ကို မွငျလိုကျရတော့ ရီခြို စိတျလှုပျရှား သှားသညျ ။ ” ညီမလေး ပါးစပျ ဟ ” စိုးကြျော ရီခြို့ ပါးစပျကို ဟပေးလိုကျ သညျနှငျ့ မငျးခနျ့ တနျးထညျ့တော့သညျ ။ ရီခြို့ ပါးစပျထဲ မငျးခနျ့ လီး ထညျ့ထားလသေညျ ။ ” စုပျလေ ” ရီခြို ရှကျပွီး မစုပျ ။ မငျးခိုငျ က သာ ရီခြို့ ခေါငျးကို ထိနျးပွီး ပါးစပျကို လိုးသလို လုပျပေးလိုကျသညျ ။ ” အကို ပွနျလုပျပေးမယျ နျော ” ရီခြို့ ကို ဆှဲထူ လိုကျပွီး စားပှဲပျေါ လကျထောကျခိုငျး လိုကျသညျ ။ မငျးခနျ့ ထိုငျပွီး ရီခြို့ ဘောငျးဘီ ကို ခြှတျလိုကျသညျ ။ ရီခြို လညျး တမငျ ငွိမျနကော လိုကျလြောနမေိသညျ ။
” အိုး အအ ” မငျးခနျ့ ရီခြို့ ဖငျကွား က အဖုတျကို ယကျပေးလိုကျ သဖွငျ့ ရီခြို အသံထှကျ ညီးမိသှားသညျ ။ စိုးကြျော ကလညျး ဘောငျးဘီခြှတျပွီး ရီခြို့ ပါးစပျထဲ လာထညျ့ပေးသညျ ။ အယကျခံရငျး လီးစုပျ နရေသဖွငျ့ ရီခြို လညျး စိတျပို ထ လာသညျ ။ စိုးကြျော လီးကို ရီခြို စုပျပေးနတေုနျး မငျးခနျ့ လီးက ကုနျးနသေော ရီခြို့ စောကျဖုတျ ထဲ တိုးဝငျ လာ လသေညျ ။ ” ဟာ အကို . ” ရီခြို တားသျောလညျး မမှီတော့ ။ စောကျဖုတျ တဈခုလုံးလညျး ရှစိတိုးသလို ဖွဈနသေညျ မို့ မတားခငျြတော့ အလိုးခံရတာ ကောငျးနသေညျ ။ မငျးခနျ့ လီး နဲ့ အလိုးခံနတေုနျး စိုးသူ လီးကို လညျး စုပျပေးနလေိုကျသညျ ။ မငျးခနျ့ကတော့ ရီခြို့ တငျသားမြားကို ဆုတျကိုငျကာ ခပျစပျစပျရိုကျပွီး ခပျပွငျးပွငျး ဆောငျ့လိုးပေးနသေညျ ။ ရီခြို လညျး မသိမသာလေး ဖငျလေး ပွနျကော့ကော့ ပေးလိုကျသညျ ။ ” ပွှတျ ဘကျဘကျ . ဘုတျ အ . ” အသံစုံ ထှကျနသေညျ ။
မငျးခနျ့ လီးပွနျထုတျလိုကျသညျ ။ စိုးကြျော ကလညျး ကွမျးပွငျတှငျ ပကျလကျ လှနျလိုကျသညျ ။ ရီခြို လညျး အလိုကျတသိ ပကျလကျလှနျပေးသော စိုးကြျော လီးပျေါ ခှကာ တကျဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ ။ ”အား အား ကောငျးလိုကျတာ . ” မငျးခနျ့လညျး လီးကို ပါးစပျထဲ လာထညျ့ပေး သဖွငျ့ စုပျရငျး အဆောငျ့ ကိုလညျး မလြော့ ။ ” တီ တီ တီ ” မငျးခနျ့ ဆီ ဖုနျး ဝငျလာ လသေညျ ။ မငျးခနျ့ ဖုနျးကို စပီကာ ဖှငျ့ကာ နားထောငျ လိုကျသညျ ။ ” ဟကေ့ောငျတှေ ဘယျရောကျနလေညျး . မငျးတို့ကို ဧညျ့သညျက စောငျ့နတေယျတဲ့ ” ” ဗြာ ” ” ဗြာ မနနေဲ့ . ပနျးဥယဉျြ အခနျး ၆၉ ကို မွနျမွနျသှား ” တဈဖကျက ပွောပွီး ဖုနျးခသြှားသညျ ။ အားလုံ့းလညျး ကွောငျအမျးအမျး ဖွဈသှားလသေညျ ။ ” ဒါ မယျမဒီ အခနျး ၆၉ . ဆိုငျမှားပွီ ဟ ” ရီခြို လညျး သူမ နှငျ့ ခြိနျးထားသညျ့ လူမြား မဟုတျမှနျး သိလိုကျတော့သညျ ။
” ကဲ ညီမ စိတျမကောငျးပါဘူး ဗြာ . အကို တို့ လူမှား သှားတယျ ” ထို အသိကွောငျ့ ရီခြို လညျး ငိုခငျြသလို ရီခငျြသလို ဖွဈသှားသညျ ။ သူမ မှာတော့ ဧညျ့သညျ တှနေဲ့ အဆငျပွအေောငျ ၂ အငျ ၁ တောငျ စှနျ့စားပွီး ခံပေးလိုကျရတာ .စိုးကြျော က ခုထိ ရီခြို ကို ပငျ့ဆောငျ့ လိုးနဆေဲ ။ ရီခြို လညျး အားမလို အားမရ ဖွငျ့ စိုးကြျော ပျေါမှ ဆငျးလိုကျ လသေညျ ။ အဝတျအစားမြား အသီးသီး ပွနျဝတျပွီး . ” ကဲ ညီမ အကိုတို့ အရေးကွီး နလေို့ ခှငျ့ပွုပါအုနျး . ခံပေးတာ ကြေးဇူးတငျတယျ . နောငျတခါ မှ ပွီးအောငျ လိုးပေးမယျ . သှားပွီ ” လူနှဈယောကျ အပွေးကလေး ထှကျသှား လသေညျ ။ ရီခြို သာ ငူတူတူ ဖွငျ့ ကနျြခဲ့လသေညျ ။ အသကျလှတျ အလိုးခံလိုကျရပွီ ။ ရီခြို ကုမ်မဏီ ကို ဖုနျးဆကျ လိုကျသညျ ။ ” အေး ရီခြို . ဆရာ ခုဘဲ ပွောသှားတယျ . ဧညျ့သညျတှေ ဒီနမေ့လာဖွဈဘူးတဲ့ . ရီခြို ကို ဖုနျးဆကျ ပါတဲ့ ” ” ငငျ့ မှားတဲ့ အခါလညျး မှားပေ မပေါ့ ” ရီခြို မောငျ့ လကျကို တှဲပွီး မင်ျဂလာဆောငျ နပွေီ ဖွဈသညျ ။
ဟာ ညီလေး မငျး ခနျ့နတေယျနျော ဧညျ့သညျနှဈယောကျ က မောငျကို နူတျဆကျနသေညျ ။ မောငျ့ မိတျဆှေ တှေ ။ ” ဟငျ ရှငျ . ရှငျတို့ ” ‘ ‘ ဟာ ကုမ်မဏီ က ညီမလေး ပါလား . ” ” ခဈြတို့က သိနတောလား ” ” အငျး အလုပျကိစ်စ နဲ့ ဆုံဖူးတယျ ” ” အကို တို့ညီမလေး နဲ့ ကုမ်မဏီ ကိစ်စ ဆကျဖို့ရှိသေးလား ” မငျးခနျ့ အပွောကို ရီခြို သဘောပေါကျသညျ ။ ရီခြို ပွုံးပွီး မကျြလုံးလေး တဈဖကျ မှိတျပွလိုကျ လသေညျ ။ မငျးခနျ့ရော . စိုးကြျော ပါ ရီခြို ဆကျသှယျ လာမညျ့ အခြိနျကို စောငျ့ကဖြို့ စိတျကူးလိုကျကြ တော့သညျ ။ သုံးလခနျ့ ကွာသျော ” ဟလို ကိုမငျးခနျ့လား ” ” ဟုတျကဲ့ ပါ ဘယျသူလညျး ” ” အလုပျချေါခငျြလို့ . ၂ အငျ ၁ . ကြှနျမ ရီရီခြို ပါ . ” ပွီး။
ရီရီချို ရုံးခန်းထဲ ကို ဝင်လိုက်သည် နှင့် ရုံးသူ ရုံးသား များ အားလုံး အပြုံးနဲ့ ဆီးကြိုလိုက်ကျသည် ။ ရီရီချို လည်း အိတ်လေး ထဲမှ အဝါရောင် စာအိတ်လေးများ တစ်ခုဆီ ရုံးသူ ရုံးသားများ ကို လိုက်ဝေ လေသည် ။ ထို အဝါရောင်စာအိတ်လေး များသည် သူမ ၏ မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာများ ပင် ဖြစ်သည် ။ ရီရီချို မှာ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ် အသားဖြူဖြူလေး ဖြစ်သည် ။ မျက်နှာသေးကာ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေး နှင့် ကလေးမျက်နှာလေး ဖြစ်သည် ။ ချစ်စရာကောင်း သဖြင့် တစ်ရုံးလုံး ကလည်း ချစ်ကျသည် ။
နောက်ဆုံး ကျန်နေသော တစ်စောင်မှာ ကုမ္မဏီပိုင်ရှင် ကိုကောင်းထက် သာ ကျန်တော့ သဖြင့် ကိုကောင်းထက် ရုံးခန်းထဲ ဝင်လိုက် လေသည် ။ ” လာ ရီချို . ဘယ်နေ့ဆောင်မှာလည်း ” ” သဘက်ခါ ပါ ဆရာ . ” ” ဒါဆို ဆရာ့ ကို အကူညီ တစ်ခုပေးအုန်း . မနက်ဖြန် ရုံးတက် ပေးပါလား . အရေးကြီး ဧည့်သည်နှစ်ယောက် နဲ့ တွေ့ဖို့ ရှိတယ် . လာ နိူင်မယ် မလား ” ” ရပါတယ် ဆရာ ရဲ့ . လာနိူင်ပါတယ် ” ” အေးကွာ . ဒီကုမ္မဏီ မှာလည်း စကားပြောကောင်းတာ ဆိုလို့ ရီချို ဘဲ ရှိတာ . မနက်ဖြန် တွေ့ရမည့် နှစ်ယောက် က အရေးကြီးတယ် . ” ” ဟုတ်ကဲ့ . သမီး ဘဲ သွားရမှာလည်း ” ” ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့် ပြောနေရတာ။
ဆရာ က မနက်ဖြန် တစ်နေကုန် အစည်းအဝေး ရှိနေတယ် . အဲ့ဒါ ဆရာ့ အစား ရီချို သွားပေးပါ . အဆင်ပြေဖို့ လိုတယ် . အဆင်မပြေရင် ဆရာတို့ ကုမ္မဏီ အများကြီး ထိခိုက် သွားနိူင်တယ် . ” ‘ ‘ ဟုတ် . သမီး ကြိုးစားပေးပါမယ် ” ” ယုံပါတယ် . ရီချို မင်္ဂလာဆောင်လည်း ဆရာ လာဖြစ်အောင် လာမှာပါ ” ” ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ . ရီချို့ ကို ခွင့်ပြုပါအုန်း . ” ” ကောင်းပါပြီ ခင်ဗျာ .” ရီချို လည်း ဒီနေ့ ရုံးခွင့် ယူထားသည်မို့ အိမ်ပြန်လာခဲ့ပြီး မင်္ဂလာဆောင် ကိစ္စ ကို စီစဉ် နေရသည် နှင့် တစ်နေ ကုန် သွားသည် ။ နောက်တစ်နေ့ ရုံးယူနီဖောင်းလေး ကျကျနန ဝတ်ပြီး ရုံးတက် လာခဲ့သည် ။
သတိုးသားလောင်း က တားသေးသည် ။ ဒါပေမယ့် ကုမ္မဏီ ကိစ္စ က အရေးကြီးနေတော့ ရီချို ပစ်မထားချင် ။ ” သမီး ရောက်ပြီ ဆရာ ” ” ဟုတ်ပြီ ရီချို . ဆရာ ကလည်း ခု အစည်းအဝေး သွားရတော့မှာ . ဟော့ဒီ လိပ်စာ ကိုသွား . အဲ့မှာ စားသောက်ခန်း တစ်ခန်း ဘိုကင်ချိတ်ထားတယ် . အဲ့ကို ဧည့်သည်နှစ်ယောက် လာ လိမ့်မယ် . ကုမ္မဏီ နဲ့ ပါတ်သတ်တာ ရှင်းပြပြီး သိချင်တာ မေးလိမ့်မယ် . အတတ်နိူင်ဆုံး အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားပေးပါ ” ” ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ . ဆရာ စိတ်မပျက်စေ ရပါဘူး . . ” ရီချို လည်း ရုံးက ပေးထားသော ကားဖြင့် ထို စားသောက်ဆိုင် သို့ သွားလိုက်သည် ။
ချိတ်ထားသော အခန်း ၆၉ ကို ရီချို သွားလိုက်သည် ။ ဆရာ က ကွက်တိ စီစဉ်ထားသည့် စားသောက်ဖွယ်ရာ များက အခန်းထဲ အသင့် ရှိနေသည် ။ ရီချို လည်း ခုံမှာ ထိုင်စောင့်နေလိုက်သည် ။ မည်သူ မျှ မရောက်သေး ။ ငါးမိနစ်ခန့်ကြာသော အခါ . ” မင်္ဂလာပါ . တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် ” အသက် သုံးဆယ်ကျော် ဒေါင့်ကောင်းကောင်း အမျိုးသား နှစ်ဦး လက်ဆွဲအိတ်လေး များဖြင့် ဝင်လာ လေသည် ။
ရီချို လည်း ထပြီး နူတ်ဆက် လိုက်သည် ။ ” ကျွန်တော် တို့ကို ကုမ္မဏီ က လွှတ်လိုက်တာ . ” ” ဟုတ် . ကျွန်မ ကိုလည်း ကုမ္မဏီ က လွှတ်လိုက်တာပါ . ” ” ဟုတ်ကဲ့ . ဟုတ်ကဲ့ . ” အားလုံး ထိုင်လိုက်ကျသည် ။ ” ကျွန်တော် တို့က ဒီက ချိတ်တဲ့ ညီမ ကို အသက် မနည်းကြီးမယ် ထင်နေတာ . ” ” ရှင် . ဟုတ်လား . ခစ်ခစ် . အလုပ်ကိစ္စ ပြောရအောင်လား ရှင် ” ” ဟုတ်ကဲ့ . ညီမ ဘယ်မှာ လုပ်ချင်ပါလည်း ဟိုတယ် မှာလား ခင်ဗျ ” စကားကြီး က တစ်မျိုးချည်းမို့ ရီချို ကြောင်အမ်းအမ်း ဖြစ်သွားသည် ။ ” ရှင် . ဒီမှာဘဲ လုပ်လိုက်မယ်လေ . ဖြစ်တတ်မလား . ” ” ရပါတယ် . ညီမ ဆန္ဒ ပါဘဲ ” ထို လူနှစ်ယောက် မျက်လုံးများသည် ရီချို့ အား ကိုက်စား မတတ်ကြည့်နေကျ သဖြင့် ရီချို ကြောက်လာသည် ။
သို့သော် အဆင်ပြေအောင် သူတို့ ကျေနပ်အောင် ကြိုးစားပေးပါ လို့ ဆရာ မှာထားသည် မို့ မျက်နှာချိုလေး သွေးနေရသည် ။ ” အကို တို့ သိချင်တဲ့ ကိစ္စတွေ . မေးလို့ရပါပြီ ရှင် . ” ” ဟုတ်ကဲ့ . ညီမ အသက် ဘယ်လောက်လည်း ” ” ရှင် ” ရီချို အလုပ်ကိစ္စ မေးမည် ထင်တာ . ခုတော့ ရီချို အသက် လာ မေးနေတယ် ။ ” နှစ်ဆယ် ပါရှင့် . အလုပ် ကိစ္စလေး ပြောရအောင်လေ ” ” ဟုတ်ကဲ့ . ခုလည်း အလုပ်ကိစ္စ ဘဲ ပြောနေတာလေ . ” ရီရီချို ကြောင်အမ်းအမ်းလေး ဖြင့် ခေါင်းညိမ့် လိုက်သည် ။ ” ဘာလည်း ညီမ က အကိုတို့ကို အသုံးမကျဘူး . မစွမ်းဆောင်နိူင်ဘူး . ထင်လို့လား . ရတယ်လေ ဒါဆိုလည်း အကိုတို့ ကုမ္မဏီ သွားမယ် . . ” ရီချို လန့်ဖြန့်သွားသည် ။ ” နေ နေ နေပါအုန်း အကိုတို့ရယ် . ဟုတ်ကဲ့ အကိုတို့ မေးတာ ဖြေပါမယ် ” ထို အခါ လူနှစ်ယောက် လည်း ရီချို ဘေး တစ်ဖက် တစ်ချက် ဆီမှာ ထိုင်လိုက်သည် ။ ရီချို လည်း ကြောက်လာသည် ။
ဒါပေမယ့် အဆင်ပြေဖို့ အရေးကြီးသည် မို့ မသိကျိုးကျွံ ပြုနေလိုက်သည် ။ ”အကို တို့ ဒါ ညီမတို့ ကုမ္မဏီ က ထုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ ” ရီချို ကြော်ညာ စာရွက်လေး ပေးလိုက်သည် ။ လူ နှစ်ယောက် ကလည်း စာရွက်ကြည့်ကာ ဟိုပစ္စည်း မေးလိုက် ဒီ ပစ္စည်းမေးလိုက် လုပ်နေသည် ရီချို လည်း အပီအပြင် ရှင်းပြလေသည် ။ သို့နှင့် ရီကျ မောကျ ဖြစ်ကာ ခင်မင် လာလေသည် ။ ” အော် ညီမ ဟို ပစ္စည်းလေး ထုတ်ခိုင်းပါလား . ” ” ဘယ် ပစ္စည်းလည်း အကို . ” ” ဟို တုန်ခါစက်တွေပေါ့ . နိူင်ငံခြား ကနေ တိုက်ရိုက်မှာပြီး တရားဝင် ဖြန့်လို့ရအောင် ” ” တုန်ခါစက် ဆိုတာ ဘာလည်း အကိုရ . ညီမ မသိလို့ . ” ထိုစဉ် ညာဘက်မှ လူသည် ရီချို နားရွက်လေး ကို လက်ကလေး ကလိလိုက်သည် ။ ရီချို လန့်ပြီး အော်လိုက်မိသည် ။
” အမလေး ယားလိုက်တာ ” ညာဘက်လူ ကလည်း ရီချို ညာဘက် နားလေး ကို လက်ကလေး ဖြင့် တို့ပြန်သည် ။ ရီချို အရမ်းယား သည်မို့ မခံနိူင်ရှာ . ” အိုးး ယားတယ် အကိုရ . ခ်ခ် ” ” အဲ့လို သဘောတရာပေါ့ . အဲ့စက် က ဒီလို လုပ် ဥပမာပြမယ် . ” ညာဘက်လူ က သူ၏ နပ်ကတိုင် ဖြုတ်လိုက်သည် ။ ရီချို ၏ လက်ကလေးများ ပူးလိုက်သည် ။ ရီချို လည်း ကြောင်အမ်းအမ်း ဖြစ်သွားသည် ။ ” ညီမလေး လက်တွေကို ဒါလေးနဲ့ ပူးချည်ထားလိုက်မယ် . ဒါဆို ညီမ လက်တွေ ကာလို့ မရတော့ဘူး . ပြီးရင် အကိုတို့က နားကို ကလိပေးမယ် . ခံစားကြည့် ” ရီချို လက်တွေကို ပူးချည်ထားမယ် တဲ့ ။ သူတို့ ငြိုငြင်လို့ မဖြစ် အလုပ်အဆင်ပြေဖို့ အရေးကြီးသည် မို့ ရီချို သတ္တိမွေးပြီး လက်ခံလိုက်သည် ။ ညာဘက်လူ ကလည်း ရီချို့ လက်လေး နှစ်ဖက် ကို ပူးချည်လိုက်သည် ။
ပြီးနောက် ပိုနေသော ကြိုးစ ကို ဆွဲကာ ရီချို လက်တွေကို ခေါင်းနောက် ပို့လိုက်သည် ။ ထို အခါ ရီချို လက်ကို ခေါင်းအုန်းထား သလို နောက်စေ့ နှင့် ကပ်နေ သလို မြောက်ပေး လိုက်ရသည် ။ ထို အခါမှ လူ နှစ်ဦး သည် ဘယ် တစ်ဖက် ညာတစ်ဖက် ရီချို့ နားလေးကို လေကလေး မှုတ်ပေးလိုက်သည် ။ ရီချို ခေါင်းလေး ပုပုသွားသည် ။ ” အီးး ယားတယ် ခ်ခ် တော်ပါတော့ ခ် ” ရီချို နားနှစ်ဖက် ကို လျှာတွေ နဲ့ ထိုးကလိ လိုက်တော့ ရီချို အသံ ထွက် လာသည် ။ ” ယားတာ ကို အောင့်ခံလေ ညီမရဲ့ ” ” မရဘူး အကိုရ တမျိုးချည်းဘဲ ” ” အဲ့ဒါ ဇိမ်ယူခြင်း တစ်မျိုးလေ . ညီမ ရဲ့ . ဒီမှာ အကို့ ကိုကြည့် . ” ဘယ်ဘက်က လူက မင်းခန့် ညာဘက်က လူက စိုးကျော် ။ မင်းခန့် သူ၏ အကျီ င်္ကို ဆွတ်ချွတ်ပြလိုက်သည် ။
ဗလ ကြွက်သားတွေက အမြောင်းလိုက် ။ ” ကဲ ညီမ အကို့နိူ့သီးတွေ ကိုင်ကြည့် ” ” ဟင့်အင်း မကိုင်ရဲဘူး ” စိုးကျော် ကလည်း ဝင်ကူသည် ။ ” ကိုင်လိုက်စမ်းပါ ညီမရယ် . ” ရီချို လက်တွေက ပူးရပ်သား ဖြစ်နေသည် ။ စိုးကျော် လည်း ရီချို လက်တွေကို ကိုင်ပြီး မင်းခန့် နိူ့သီးတွေကို စမ်းပေးလိုက်သည် ။ ရီချို ကတော့ ရှက်ပြုံးလေး ဖြစ်နေသည် ။ စိုးသူ လည်း ရီချို လက်တွေကို နောက်ပြန်ဆွဲပြီး ခေါင်းနောက် ပြန်ပို့ထားပြီး ရီချို့ ရင်ဘက်ကို လက်ဖြင့် ကိုင်စမ်း လိုက်သည် ။ ရီချို လန့်သွားသည် ။ ” ဟာ . အကို ” ” ကဲ ယားလား . ခံစားကြည့် ” ရီချို နို့တွေ အကျီ င်္ပေါ် မှ အနယ်ခံနေ ရသဖြင့် ရီရီချို ရင်တွေ ခုန်လာသည် ။ သူတို့ကိုင်တွယ် ပွတ်သတ်နေမှု ကို ကျေနပ်နေသလို ဖြစ်နေသည် ။ ယားလည်း ယားနေသည် ။ နယ်ရင်း နယ်ရင်း နှင့် ရီချို လည်း ဖီးလ်တက် လာသည် ။ ” ဟာ ” ရီချို အကျီ င်္ကြယ်သီးများ ပြုတ်သွားလေသည် ။ အောက်မှ ဘရာစီယာ ပန်းရောင်လေး ပင် ပေါ်လာ သည် ။
မင်းခန့် လည်း ကြယ်သီးများ ကို တမင် ရဲတင်းစွာ ဖြုတ်နေလေသည် ။ ရီချို လည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ ။ ထွက်ပြေးရမလည်းလား . ငြိမ်ခံနေရမည်လား မဝေခွဲ တတ်တော့ ။ ” ဟာ အကို မလုပ်နဲ့တော့လေ . ဒီလောက်ဘဲ ကောင်းတယ် ” ” ကောင်းလက်စ နဲ့ ပို ကောင်းအောင် ပြမလို့ပါ . ” ပြောရင်း နှင့်ပင် အပေါ်ယူနီဖေါင်းလေး ပွင့်ပြီး ဘရာစီယာလေးကို အောက်သို့ လှန်ချခြင်း ခံလိုက်ရသည် ။ နို့အုံ နှစ်ဖက် နှင့် နို့သီးခေါင်း နီညိုရောင်လေးတွေ က ဘွားခနဲ ပေါ်သွားသည် ။ လူ နှစ်ဖက် ခေါင်းက ပြိုင်တူ ငုံဝင် သွားသည် ။ ” အိုး ဟာ . ယားတယ် . မစို့တော့နဲ့ ” လက်တွေကလည်း နောက်ပြန်လှန်ဆွဲ ခံထားရသည် ။ နို့နှစ်ဖက်လုံး ပြိုင်တူ အစို့ခံလိုက် ရသဖြင့် ရီချို အသည်းယား လာသည် ။ ထို နှစ်ယောက်ကတော့ တပြွတ်ပြွတ် ဖြင့် ငုံစို့နေဆဲ ။
စိုးကျော် သုတ်ခနဲ ထပြီး အိတ်ထဲ မှ ပစ္စည်းတစ်ခု ထုတ်ကာ မီးပလက်ထိုး လိုက်ပြီး ရီချို ကို လာပြသည် ။” ညီမလေး ဒါက တုန်ခါစက်အပြင်းစားလေ . နို့ကိုင် ခံရတာ ထက် ကောင်းတယ် . ပြပေးမယ် ” ရီချို ကတော့ ကြောင်အမ်းအမ်း ဖြစ်နေဆဲ ။ ” ဗြီးးးးးးးးးးးး ” ” အားးး အကို ခံစားရတာ တမျိုးဘဲ . အရမ်း အသည်းယားတယ် . ” ရီချို့ နို့တွေ ကို တုန်ခါစက်ဖြင့် တို့ပေးလိုက် ခြင်း ဖြစ်သည် ။ ရီချို တုန်ခါစက် ကြောင့် ဖီးလ်ပို တတ်လာတော့သည် ။ ထိုစဉ် စိုးကျော် သည် တုန်ခါစက် ကို ရီချို ဘောင်းဘီခွကြား ပြောင်းထိုး လိုက်သည် ။ ” ဟာ . အဲ့ဒါ မလုပ်ပါနဲ့ ” သူမ တားသော်လည်း မရတော့ ။ ရီချို ပေါင်များကို မင်းခန့် ဖမ်းချုပ်ပြီး ဆွဲကား ပစ်လိုက်သည် ။ ထို အခါ စိုးကျော် ရီချို ပေါင်ခွ ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အနေအထားဖြင့် စက်ကို အဓိက နေရာအား ဖိကပ်ထား လိုက်သည် ။
ရီချို အသားတွေ တဆက်ဆက် တုန်လာပြီး ” အိုး အကို ရပ်လိုက်တော့ . မရတော့ဘူး . အရမ်း ယားတက် လာပြီ . အဟင့် ” စိုးကျော် ကတော့ ရီချို့ ခွအား ပိုလိုပင် ဖိပွတ်လိုက်သည် ။ စက်သံကလည်း တဗြီးဗြီး နှင့် မြည်နေသလို ရီချို လည်း အရသာ သိလာ သဖြင့် ငြိမ်နေလိုက်သည် ။ စိုးကျော် ဆတ်ခနဲ ရီချို ဘောင်းဘီ ကြယ်သီးကို ဖြုတ်ခါ ဆွဲချွတ်ချလိုက်သည် ။ အပေါ် က မင်းခန့် က သိုင်းဖက် ပြီး ချုပ်ထားသဖြင့် ရီချို မရှုန်းနိူင်တော့ ။ ” ဒီတိုင်းဘဲ လုပ်ပါ . မချွတ်ပါနဲ့တော့ . ” ” ဘောင်းဘီ က ထူနေတယ် ညီမရဲ့ . ပို ကောင်းသွားမယ် ကြည့်နေ ” ပြောရင်း ရီချို ဘောင်းဘီလေး ကျွတ်ခါ အတွင်းခံပန်းရောင်လေးသာ ကျန်တော့သည် ။ အဖုတ် ကလည်း ဖောင်းကြွ နေသည်မို့ မို့မို့ကြီး ဖြစ်နေသည် ။ စိုးကျော် စက်ဖြင့် ဖိထိုး ကပ်လိုက်သည် ။
” အမေ့ အိုးအအ . အကို အားး ” ရီချို ကျင်တင်တင် ဖြစ်လာတော့သည် ။ အထိ မခံနိူင်တော့ ။ ပြောကာမှ ပိုဆိုးသလို ရီချို အတွင်းခံ ဘေးတစ်ဖက် ကို ဆွဲလှန်ပြီး ပေါ်လာသော ရီချို စောက်ဖုတ် ကို တန်း ဖိတို့ လိုက်လေသည် ။ ” အားးးး အကို ညီမ မခံနိူင်တော့ဘူး . တော်ပြီ . တော်ပြီ . ပိတ်လိုက်ပါတော့ ” မင်းနိူင် ရီချို့ ပေါင်တွေ ဆွဲခွဲထား သဖြင့် နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာ ဟကာ အစေ့လေးဖြင့် ထောင်နေတော့သည် ။ အခေါင်းနီရဲရဲလေး မှလည်း အရည်များ စီးကျလာသည် ။ စိုးကျော် စက်ကို စောက်စေ့လေး အား ဖိထိုး ကလိပေး ထားသည် ။ ခဏ ကြာမှ စိုးကျော် စက်ပိတ် လိုက်သည် ။ ရီချို လည်း စောက်ရည် တွေ ရွှဲနေပြီ ။ မင်းခန့် ရီချို ကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီး သူ မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည် ။ စိုးကျော် ကတော့ ရီရီချို လက်က ကြိုးကို ဖမ်းဆွဲထားသည် ။ မတ်တပ်ရပ်နေသော မင်းခန့် ရီချို မျက်နှာရှေ့ တွင် ဘောင်းဘီချွတ်ချ လိုက်သည် ။
လီးကြီး က ဖောက်ခနဲ ကန်ထွက် လာသည် ။ ရီရီချို ထို လီးကို မြင်ပြီး တံတွေးများပင် မြိုချမိသွားသည် ။ မောင် နှင့် ဖြစ်ဖူးသော်လည်း မောင့်ထက် သိသိသာသာကြီး သော လီးကြီး ကို မြင်လိုက်ရတော့ ရီချို စိတ်လှုပ်ရှား သွားသည် ။ ” ညီမလေး ပါးစပ် ဟ ” စိုးကျော် ရီချို့ ပါးစပ်ကို ဟပေးလိုက် သည်နှင့် မင်းခန့် တန်းထည့်တော့သည် ။ ရီချို့ ပါးစပ်ထဲ မင်းခန့် လီး ထည့်ထားလေသည် ။ ” စုပ်လေ ” ရီချို ရှက်ပြီး မစုပ် ။ မင်းခိုင် က သာ ရီချို့ ခေါင်းကို ထိန်းပြီး ပါးစပ်ကို လိုးသလို လုပ်ပေးလိုက်သည် ။ ” အကို ပြန်လုပ်ပေးမယ် နော် ” ရီချို့ ကို ဆွဲထူ လိုက်ပြီး စားပွဲပေါ် လက်ထောက်ခိုင်း လိုက်သည် ။ မင်းခန့် ထိုင်ပြီး ရီချို့ ဘောင်းဘီ ကို ချွတ်လိုက်သည် ။ ရီချို လည်း တမင် ငြိမ်နေကာ လိုက်လျောနေမိသည် ။
” အိုး အအ ” မင်းခန့် ရီချို့ ဖင်ကြား က အဖုတ်ကို ယက်ပေးလိုက် သဖြင့် ရီချို အသံထွက် ညီးမိသွားသည် ။ စိုးကျော် ကလည်း ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး ရီချို့ ပါးစပ်ထဲ လာထည့်ပေးသည် ။ အယက်ခံရင်း လီးစုပ် နေရသဖြင့် ရီချို လည်း စိတ်ပို ထ လာသည် ။ စိုးကျော် လီးကို ရီချို စုပ်ပေးနေတုန်း မင်းခန့် လီးက ကုန်းနေသော ရီချို့ စောက်ဖုတ် ထဲ တိုးဝင် လာ လေသည် ။ ” ဟာ အကို . ” ရီချို တားသော်လည်း မမှီတော့ ။ စောက်ဖုတ် တစ်ခုလုံးလည်း ရွှစိတိုးသလို ဖြစ်နေသည် မို့ မတားချင်တော့ အလိုးခံရတာ ကောင်းနေသည် ။ မင်းခန့် လီး နဲ့ အလိုးခံနေတုန်း စိုးသူ လီးကို လည်း စုပ်ပေးနေလိုက်သည် ။ မင်းခန့်ကတော့ ရီချို့ တင်သားများကို ဆုတ်ကိုင်ကာ ခပ်စပ်စပ်ရိုက်ပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်လိုးပေးနေသည် ။ ရီချို လည်း မသိမသာလေး ဖင်လေး ပြန်ကော့ကော့ ပေးလိုက်သည် ။ ” ပြွတ် ဘက်ဘက် . ဘုတ် အ . ” အသံစုံ ထွက်နေသည် ။
မင်းခန့် လီးပြန်ထုတ်လိုက်သည် ။ စိုးကျော် ကလည်း ကြမ်းပြင်တွင် ပက်လက် လှန်လိုက်သည် ။ ရီချို လည်း အလိုက်တသိ ပက်လက်လှန်ပေးသော စိုးကျော် လီးပေါ် ခွကာ တက်ဆောင့်ပေးလိုက်သည် ။ ”အား အား ကောင်းလိုက်တာ . ” မင်းခန့်လည်း လီးကို ပါးစပ်ထဲ လာထည့်ပေး သဖြင့် စုပ်ရင်း အဆောင့် ကိုလည်း မလျော့ ။ ” တီ တီ တီ ” မင်းခန့် ဆီ ဖုန်း ဝင်လာ လေသည် ။ မင်းခန့် ဖုန်းကို စပီကာ ဖွင့်ကာ နားထောင် လိုက်သည် ။ ” ဟေ့ကောင်တွေ ဘယ်ရောက်နေလည်း . မင်းတို့ကို ဧည့်သည်က စောင့်နေတယ်တဲ့ ” ” ဗျာ ” ” ဗျာ မနေနဲ့ . ပန်းဥယျဉ် အခန်း ၆၉ ကို မြန်မြန်သွား ” တစ်ဖက်က ပြောပြီး ဖုန်းချသွားသည် ။ အားလုံ့းလည်း ကြောင်အမ်းအမ်း ဖြစ်သွားလေသည် ။ ” ဒါ မယ်မဒီ အခန်း ၆၉ . ဆိုင်မှားပြီ ဟ ” ရီချို လည်း သူမ နှင့် ချိန်းထားသည့် လူများ မဟုတ်မှန်း သိလိုက်တော့သည် ။
” ကဲ ညီမ စိတ်မကောင်းပါဘူး ဗျာ . အကို တို့ လူမှား သွားတယ် ” ထို အသိကြောင့် ရီချို လည်း ငိုချင်သလို ရီချင်သလို ဖြစ်သွားသည် ။ သူမ မှာတော့ ဧည့်သည် တွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ၂ အင် ၁ တောင် စွန့်စားပြီး ခံပေးလိုက်ရတာ .စိုးကျော် က ခုထိ ရီချို ကို ပင့်ဆောင့် လိုးနေဆဲ ။ ရီချို လည်း အားမလို အားမရ ဖြင့် စိုးကျော် ပေါ်မှ ဆင်းလိုက် လေသည် ။ အဝတ်အစားများ အသီးသီး ပြန်ဝတ်ပြီး . ” ကဲ ညီမ အကိုတို့ အရေးကြီး နေလို့ ခွင့်ပြုပါအုန်း . ခံပေးတာ ကျေးဇူးတင်တယ် . နောင်တခါ မှ ပြီးအောင် လိုးပေးမယ် . သွားပြီ ” လူနှစ်ယောက် အပြေးကလေး ထွက်သွား လေသည် ။ ရီချို သာ ငူတူတူ ဖြင့် ကျန်ခဲ့လေသည် ။ အသက်လွတ် အလိုးခံလိုက်ရပြီ ။ ရီချို ကုမ္မဏီ ကို ဖုန်းဆက် လိုက်သည် ။ ” အေး ရီချို . ဆရာ ခုဘဲ ပြောသွားတယ် . ဧည့်သည်တွေ ဒီနေ့မလာဖြစ်ဘူးတဲ့ . ရီချို ကို ဖုန်းဆက် ပါတဲ့ ” ” ငင့် မှားတဲ့ အခါလည်း မှားပေ မပေါ့ ” ရီချို မောင့် လက်ကို တွဲပြီး မင်္ဂလာဆောင် နေပြီ ဖြစ်သည် ။
ဟာ ညီလေး မင်း ခန့်နေတယ်နော် ဧည့်သည်နှစ်ယောက် က မောင်ကို နူတ်ဆက်နေသည် ။ မောင့် မိတ်ဆွေ တွေ ။ ” ဟင် ရှင် . ရှင်တို့ ” ‘ ‘ ဟာ ကုမ္မဏီ က ညီမလေး ပါလား . ” ” ချစ်တို့က သိနေတာလား ” ” အင်း အလုပ်ကိစ္စ နဲ့ ဆုံဖူးတယ် ” ” အကို တို့ညီမလေး နဲ့ ကုမ္မဏီ ကိစ္စ ဆက်ဖို့ရှိသေးလား ” မင်းခန့် အပြောကို ရီချို သဘောပေါက်သည် ။ ရီချို ပြုံးပြီး မျက်လုံးလေး တစ်ဖက် မှိတ်ပြလိုက် လေသည် ။ မင်းခန့်ရော . စိုးကျော် ပါ ရီချို ဆက်သွယ် လာမည့် အချိန်ကို စောင့်ကျဖို့ စိတ်ကူးလိုက်ကျ တော့သည် ။ သုံးလခန့် ကြာသော် ” ဟလို ကိုမင်းခန့်လား ” ” ဟုတ်ကဲ့ ပါ ဘယ်သူလည်း ” ” အလုပ်ခေါ်ချင်လို့ . ၂ အင် ၁ . ကျွန်မ ရီရီချို ပါ . ” ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ပေးစပျမဲ့ညီမ